Dagaallo xalay ka dhacay Muqdisho ayadoo ay ciidamada Itoobiya ku noqonayaa xerooyinka ciidamada iyo ra'isul wasaare Nuur Cadde iyo madaxwene Yuusuf oo laga sugayo in ay baarlamaanka horkeenaan dowladdii ah soo dhiseen inta ka horeysa 2da bisha Janaayo 2008. Ruunkinet 09/12/07
Waxaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho dagaallo goos goos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada Itoobiya iyo kooxo ka soo horjeeda oo la baxay Maqaawimada.
Dagaalkan oo ka dhacay agagaarka hotel Florence oo aan aad uga fogeyn suuqa Bakaaraha ayaa waxaa laysu adeegsaday hub kala duwan oo uu MB ka mid yahay ayadoo hubka waaweyn lala beegsanaayay xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah.
Sidoo kale, Ciiidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay ka bexeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho ayagoo ku laabtay xerooyinka ciidamada.
Xaafadaha ay ka bexeen ayaa waxaa ka mid ah Cali Kamiin, Black sea iyo goobo kale.
Dhanka kale, madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Nuur Cadde ayaa laga sugayaa in ay horkeenaan golaha wasiirada cusub golaha baarlkmaanka si loo ansixiyo inta ka horeysa billowga bisha Janaayo ee 2008.
Wararka ka immaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in ay jiraan xildhibaanno aad u badan oo doonaya in ay diidan ansixinta golaha wasiirada cusub ayadoo dhinaca dowladda laga doonaya in ay helaan 139 xubnood oo ogolaada ansixinta golaha wasiirada cusub.
Qaar ka mid ah golaha baarlamaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Nuur Cadde ay wadaan meer meerin ay ku daalinayaan xildhibaannada ka soo horjeeda golaha wasiirada cusub si ay u kala furfuraan kadibna ay u horkeenaan ansixintooda golaha baarlamaanka.